कोभिड–१९ महामारीका कारण आयस्रोत गुमेर उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर बनेका बेला नेपालीको भान्छा अचाक्ली महँगिएको छ। तोरी, भटमास, सनफ्लावरको तेलसँगै चामल, केराउलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। यसले गर्दा रोजगारी गुमाएका र कम ज्यालामा काम गर्ने वर्ग बढी मारमा परेका छन्। खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो दुई साता अवधिमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य निकै बढेको छ। ‘पछिल्लो डेढ वर्षमा सबैभन्दा बढी खानेतेलमा मूल्य बढेको छ’, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘प्रतिलिटर...
काठमान्डाैं / दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकासिएको छ। अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण उपभोक्ता खर्च धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। कोभिड १९ महामारीका कारण आयस्रोत गुमेर कमजोर बनेको क्रयशक्तिबीच नेपालीको भान्छा अचाक्ली महँगिएको छ। भटमास, सनफ्लावरको तेलसँगै चामल, केराउ, हरियो तरकारी, कुखुराको मासु, खाना पकाउने ग्यासको भाउ उच्च परिमाणमा बढेको छ। यस्तै, पेट्रोल र डिजेलको मूल्य पटक–पटक... The post दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकासियाे appeared first on Purbeli News.
क्रिकेटमा यसरी पनि आउट भइँदो रहेछ ? (भिडियो)
श्रीलंकाका ओपनिङ ब्याट्स्म्यान दनुष्का गुणतिलकलाई फील्डिङमा बाधा गरेकोमा आउट दिइएपछि क्रिकेट जगतमा बहस शुरू भएको छ । बुधवार वेस्ट इन्डीजविरुद्धको पहिलो एकदिवसीयमा दनुष्का विचित्र तरिकाले आउट भएपछि श्रीलंका आठ विकेटले पराजित भयो । गुणतिलकले ५५ रन बनाएका थिए र कप्तान दिमुथ करुणारत्नेसँग पहिलो विकेटको साझेदारीमा १०५ रनको साझेदारी गरेका थिए । श्रीलंकालाई विशाल स्कोरतिर लग्दै गरेको बेलामा करुणारत्नेले ५२ रन बनाएर वेस्ट इन्डीजका कप्तान कीरोन पोलार्डबाट कट र यान्ड बोल्ड भए । म्याचको विवादास्प...
भागरथीहरु कहिलेसम्म असुरक्षित भइरहने?
काठमाडौं । कोभिड–१९ महामारीका कारण आयस्रोत गुमेर उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर बनेका बेला नेपालीको भान्छा अचाक्ली महँगिएको छ। तोरी, भटमास, सनफ्लावरको तेलसँगै चामल, केराउलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। यसले गर्दा रोजगारी गुमाएका र कम ज्यालामा काम गर्ने वर्ग बढी मारमा परेका छन्।खुद्रा व्या...
चमत्कार भइहाले मात्रै निर्धारित मितिमा निर्वाचन : भोजराज पोखरेल
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले प्राविधिक पक्षको जटिलताका कारण तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन गाह्रो रहेको बताएका छन्
एक महिनापछि तातोपानी नाकाबाट भित्रियो चिनियाँ स्याउ, ढुवानी लागत बढ्दा महँगियो भाउ
बीजमांडू कार्तिक २०७७
च्याङ्ग्राको भाउ वेपत्ता महँगो, भक्तपुरको सल्लाघारीमा बिक्री, खाद्यले नल्याएपछि महँगियो भाउ
बीजमांडू आश्विन २०७७
मुस्ताङबाट हिँडाइयो ६ हजार च्यांग्रा, किसानको गोठमै महंगियो भाउ
२९ असोज, काठमाडौं । कोभिड-१९ का कारण कोरला नाका ठप्प भएपछि दशैंमा मुस्ताङ्गे च्यांग्राको भाउ महंगिएको छ । तिब्बतबाट च्यांग्रा ल्याउन नपाउँदा मुस्ताङमा एउटै च्यांग्राको भाउ प्रतिगोटामै पाँच देखि ७ हजारसम्मले महंगिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना …
दसैं नलाग्दै तिहारमा पड्काउने पटाकाको भाउ महँगियो, भारतमा आधा कारखाना बन्द, २०% उत्पादन
राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार खाद्य तथा पेय पदार्थमा मुद्रास्फीति ८.१६ प्रतिशत पुगेको छ। गत साल यो दर ३.०९ प्रतिशतमा सीमित थियो।